Donald Trump oo James Mattis oo loo yaqaan 'Eyga Waalan' u magacaabay xoghayaha difaaca Mareykanka - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldDonald Trump oo James Mattis oo loo yaqaan ‘Eyga Waalan’ u magacaabay xoghayaha difaaca Mareykanka
Donald Trump ayaa sheegay in magacaabida rasmiga ah ee Mattis ay imaan doonto Isniinta soo socota. [Sawirka: Reuters]
Washington-(Puntland Mirror) Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu u magacaabi doono xoghayaha difaaca Janaraalka howlgabka ah ee ciidamada badda, James Mattis.
Mattis, oo loo yaqaan “Eyga Waalan” ayaa caan ku ahaa hadaladiisa adkaa, isagoo howlgab noqday 2013, waxaana uu kasoo shaqeeyay dalalka Ciraaq iyo Afkaanistaan.
“Waxaanu rabnaa in aan u magacowno Eyga Waalan, Mattis xoghayahayaga difaaca,” Trump ayaa sidaa yiri Khamiistii shalay mar uu ka qeybgalayay banaanbax lagu taageerayay guushiisa.
Madaxweynaha la doortay ayaa intaas ku daray in magacaabida rasmiga ah ee Mattis ay imaan doonto Isniinta soo socota.
Ganacsadaha siyaasiga noqday, Donald Trump, ayaa madaxweyne loo doortay 8-dii bishii lasoo dhaafay ee November, waxaana uu xilka si rasmi ah ula wareegi doonaa 20-ka bisha Janaayo ee sanadka soo socda 2017-ka.
August 15, 2017 Xoghayaha Difaaca Mareykanka: Weerarka Waqooyiga Kuuriya wuxuu keeni doonaa dagaal